Baro inaad u turjunto qoraallada ka soo baxa Ingiriisiga iyo Isbaanishka ee leh Siri ee ku saabsan iOS 11 | Wararka IPhone
iOS 11 waxay keeneen isbedel aad muhiim u ah heerka interface ee iPad laakiin heer waxqabad qaar ka mid ah dhinacyada xiisaha leh ayaa la soo saaray sida codsiyada cusub ee faylasha, ama maareeyaha multimedia ee AirPlay 2 ama hagaajinta kamaradda. Siri wuxuu ku fiicnaaday macruufka 11 Laakiin wali waxay ubaahantahay horumarin weyn maadaama kaaliyayaasha kale, sida Google Assistant, ay ugafiicanyihiin siyaabo badan.
Mid ka mid ah horumarinada lagu sameeyay kaaliyaha codka Apple ee iOS 11 ayaa ahaa awooda u tarjun ereyada ama qoraallada ka soo baxa Ingiriisiga una beddelo luqado kale. Waqtigaan la joogo, kaliya tarjumaadda ka soo baxeysa Ingiriisiga iyo luqadaha kale ayaa la heli karaa, laakiin waxaa la filayaa in wararka soo socda mustaqbalka luuqado cusub la dhexgeli doono si uu Siri u noqdo Turjumaan Universal. Waa tan sida loo isticmaalo qalabkan.
U turjun qoraallada Ingiriisiga iyo Isbaanishka ee Siri ee ku saabsan iOS 11
Muhiimadda ay leedahay garashada afafku waxay in badan ka muuqataa bulsho ku hadasha Af Ingiriisiga oo noqonaya luqadda doorbididda meelo badan. Laakiin kuwa wali dhib ku qaba luqaddan IOS 11 waxay u ogolaaneysaa inay turjumaan qoraalada. Xilligan la joogo tarjumaaddan waxaa laga heli karaa iOS 11 ka mid ah ingiriisi ilaa Mandarin, Faransiis, Jarmal, Talyaani iyo Isbaanish. Xaaladdeenna, waxaan uga tarjumi karnaa ereyada iyo qoraallada Ingiriis illaa luqadeena, Isbaanishka.
Sidii aan horayba u soo sheegay, waxaa la filayaa in wixii ku soo kordha mustaqbalka Apple wuxuu ku darayaa luuqado cusub howlaha tarjumaadda si loo kordhiyo awoodaha saaxir iOS ah. Ma diidi karno inay tahay boodbooyin muhiim ah marka la eego howlaha uu Siri qaban karo, laakiin kaaliyaha waa inuu horumariyaa si aan looga tagin.
Si aad uga turjunto qoraallada Ingiriisiga iyo Isbaanishka, waa inaad raacdaa talaabooyinka soo socda:
Soo gal Qalabka qalabkaaga oo riix Siri, ka dibna dooro Idioma una beddel Ingiriis (Mareykanka)
Markaa waxaan ku ordi karnaa saaxirka iyadoo la adeegsanayo laba hab: iyadoo la adeegsanayo Hey siri (haddii aan shaqeyno) ama adigoo adeegsanaya saxaafadda joogtada ah ee badhanka Guriga
Way kufilan tahay in la dhaho «Sidee baan idhaahdaa (qoraalka waxaan rabnaa inaan turjunno) Isbaanish ah »
Markiiba, Siri ayaa kaaga jawaabi doonta tarjumaadda Isbaanishka. Intaas waxaa sii dheer, waxay kuu ogolaaneysaa inaad maqasho dhawaaqa saxda ah ee qoraalka tarjumay. Si kastaba ha noqotee, ma awoodi doontid inaad ku maqashid qoraalka Ingiriisiga ku dhawaaqida (macquul ahaan, haddii aan ku hadalnay Ingiriis waan ogaan doonnaa ku-dhawaaqidda).
Shaqadu waa mid xiiso u leh kiisaska qaarkood laakiin beddel setinka Siri markasta oo aan rabno inaan turjuno qoraal waa wax dhib iyo culeys leh. Taasi waa sababta aan u rajeyneyno in mustaqbalka iOS iyo Siri ay helaan luqado cusub oo turjumaad ah, kaas oo xiriirkiisu wadamada kale aad uga fududaan doono. Tani waa mid ka mid ah adeegsiga badan ee shaqadani ku yeelan karto meel ka baxsan dalkeenna hooyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Tani waa sida tarjumaha Siri ugu shaqeeyo iOS 11